रोकिएको अध्ययनलाई अष्ट्रेलियामा कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ ? - Himalayan Kangaroo
रोकिएको अध्ययनलाई अष्ट्रेलियामा कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ ?
Posted by Himalayan Kangaroo | ११ कार्तिक २०७५, आईतवार ०१:२७ |
मेलबर्न । तपाईंसँग ब्याचलर डिग्रीको प्रमाणपत्र छैन तर पोष्ट ग्राजुएसन गर्न चाहनुहुन्छ ? यदि हो भने अष्ट्रेलियामा तपाईंको पोष्ट ग्राजुएसन अध्ययन गर्ने त्यो चाहना र सपना पूरा हुन सक्छ । तर यसको लागि भने सम्बन्धित क्षेत्रमा पांच वर्षसम्म काम गरेको कार्य अनुभव हुनुपर्नेछ । पांच वर्षे कार्य अनुभवलाई ब्याचलर डिग्रीको अध्ययन सरह मानिनेछ । त्यसैले त्यही अनुभवको आधारमा तपाईले पोष्ट ग्राजुएसन कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ जुन विश्वव्यापी रुपमा मान्य हुनेछ । पोष्ट ग्राजुएसनको अध्ययनले तपाईलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा थप दक्ष समेत बनाउने छ । त्यस्तै तपाईंसँग अझ सात वर्षको कार्य अनभव भएमा, पोष्ट ग्राजुएसनको लागि एडभान्स स्ट्याण्डिङ समेत पाउनुहुनेछ । अर्थात तपाईले सहज रुपमा पोष्ट ग्राजुएसनमा भर्ना पाउनुहुन्छ ।
यदि कामको सुरुवात गर्दा तपाईंसँग उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र थिएन भने पनि, तपाइको हालको कार्य अनुभवको सहयोगले तपाईले पोष्ट ग्राजुएसन अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ । यसरी तपाईले पाउनुहुने पोष्ट ग्राजुएसनको डिग्री पनि अष्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्कभित्रै पर्दछ । यसको फाइदा के छ भने यदि ग्राजुएशन डिप्लोमाको प्रमाणपत्र तपाईंसँग छ भने मास्टर्सलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुनेछ ।
तपाईको हालको योग्यता र अध्ययनका बाटोहरुको विस्तृत जानकारीहरु विभिन्न युनिभर्सीटीका वेभसाइटहरु मार्फत थाहा पाउन सक्नुहुनेछ । यस्तै तपाईको अहिलेको ज्ञानले कसरी मद्दत गर्न सक्नेछ र कुन पाठ्यक्रम तपाईको लागि उपयुक्त हुनेछ, यसबारेमा पनि धेरै अष्ट्रेलियन करियर काउन्सिलिङ अनलाइनहरुबाट जानकारी लिन सकिनेछ ।
त्यसैले मेरो पढाइ छुट्यो,अथवा शैक्षिक योग्यता पुगेन भनेर चिन्तामा बस्नुको साटो बरु कसरी अगाडिको पढाइ पूरा गर्ने भन्ने खोजीनीतिमा लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ । किनभने अष्ट्रेलियाको शैक्षिक प्रणाली यति सम्पन्न छ कि सकभर यसले कसैलाई निराश हुन दिदैन । कुनै न कुनै विकल्प यहाँको शैक्षिक प्रणालीमा जरुर हुन्छ ।
Previousलेस्टर सिटीका मालिकको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त
Nextशशांक कोइरालाले घरमै बोलाएर सीतादेवीलाई चेकमा सही गर्न भनेपछि….
३ माघ २०७५, बिहीबार ०५:०१
२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०९:१८
अचेल केही आफ्ना लाग्दैनन्
११ चैत्र २०७४, आईतवार ०६:०८
मोदी मुस्ताङ आउने भएपछि मुक्तिनाथ मन्दिर प्रवेशमा दर्शनार्थीलाई रोक
२५ बैशाख २०७५, मंगलवार ०७:२२